Commission Scolaire des Découvreurs | BLI Zvikoro zvemitauro muCanada
Zvirongwa zvePathwayCommission Scolaire des Découvreurs
Nzira yako yekuCanadaCommission Scolaire des Découvreurs
Commission scolaire des Découvreurs yakagadzirwa muna 1986 zvichitevera kubatanidzwa kweCommission scolaire de Sainte-Foy uye Commission scolaire régionale de Tilly.
Yegore rechikoro ra 2018-2019, yakapa mabasa ekudzidzisa kune vangangoita zviuru gumi nezvitatu vadzidzi vekusekondari uye sekondari uye vangangove 13,000 kudzidziswa kwemabasa uye vadzidzi vevanhu vakuru.
Vadzidzi vayo vakapatsanurwa muzvikoro makumi maviri nemaviri, zvinosanganisira 22 zvikoro zvepuraimari, 14 zvikoro zvesekondari, chikoro chepuraimari chechipiri, nzvimbo mbiri dzekudzidzisa basa, 3 nzvimbo yekudzidzisa vanhu vakuru, 1 yekudzidzisa unit uye 2 chikoro chakakosha kune vadzidzi vakaremara.
Dunhu reCommission scolaire des Découvreurs rinosanganisira chikamu chedunhu reCapitale-Nationale, kureva Borough yeSainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge pamwe nemaguta eSaint-Augustin-de-Desmaures neL'Ancienne-Lorette ( vangangoita 135,000 vanhu).
Commission Scolaire des DécouvreursMamwe mashoko
Zvinoenderana nechirongwa, ndapota bvunza yedu University Pathway department.
3 months zvisati zvaitika
Yepamutemo French B2
COMPUTER GRAPICS - DEP - 1800 HURES 17 Mwedzi
Mune mifananidzo yemakomputa, vadzidzi vanodzidza kushandisa masheji, mavara, mapikicha, typography nemifananidzo kuitira kuti vakwanise kugombedzera nekutumira meseji. Kuti uite izvi, iwe unofanirwa kugona zvishandiso zvakanaka.
Vedu vapedza kudzidza vanozvisiyanisa ivo pachedu mumusika webasa nekuziva kwavo kwakanaka kwemifananidzo, mifananidzo yemifananidzo, kudhinda uye screen kuburitsa uye webhu peji peji rekugadzira. Ichi chirongwa chitsva chichavatendera kuti vakwanise kuve nehunyanzvi hwekuita nedhijitari.
Kudzidziswa uku kwakasarudzika kunoisa mudzidzi pakati pekudzidza kwake. Nenzira iyi, anokudziridza kuzvitonga nehunyanzvi hwesangano.
KUSHANDISA KWEMAHARA - DZVIMBIKU - 1800 HURES 17 Mwedzi
Iwe unofarira makombuta uye unoda kuwana hwaro hwakasimba mune software, hardware uye networking? Iyo purogiramu yekutsigira yekombuta inosangana nezvako zvinotarisirwa.
Vakapedza kudzidza vachakwanisa kugadzirisa matambudziko munzvimbo idzi dzese dzebasa. Kunyangwe iwe uchida kushanda nemaoko mumusangano, batsira vashandisi kana kuchengetedza mataneti, iwe uchawana mukudzidziswa uyu mukana wekukwanisa kuzere kugona kwako.
Sezvo matekinoroji anokura nekukurumidza, uku kudzidziswa kunenge kuri kutanga kwekudzidzira kupfuurira.
JEWELRY KUSVIRA - DEP - 1800 HURES 17 Mwedzi
Nakidzwa kudzidziswa kwakanyatsotarisana nezvinodiwa pamusika wevashandi. Nzvimbo yekufunda, kunaka kwemichina yekushandisa uye maekisesaizi akagadziridzwa kuti ave echokwadi achave nechokwadi chekuvandudza ruzivo rwako mune yechokwadi uye inosimudzira mamiriro ekugadzira.
Kuvaka DESIGN - DEP - 1800 HURES 17/28 Mwedzi
Passionate nezve kuvaka uye komputa basa? Iva mugadziri wekugadzira anotenda kune ino yekudzidzira kosi yakagadzirirwa kugutsa ivo vanonyanya kudiwa vashandirwi.
Iwe unozodzidza kushandisa yakakwirira dhizaini dhizaini kuti ugadzire zvekuvakisa, dhizaini uye meakisi ekuvaka zvirongwa mune iyo inosanganisa kudzidzisa kwemudzidzisi uye pane-iro-basa rovedzo.
Iva neFrench French B2
Iyo kopi yeHight yako diploma yechikoro uye yakanyorwa muChirungu kana French, notarized uye inoshandurwa
Ikopi yeCCA yako
Kopi yemvumo yako yekudzidza
Uchapupu hwehuwandu hwemari